Intsha nokushaywa nokweluswa kwemithetho – Nongoma
Published by Nongoma-Admin2 at July 16, 2018
UMkhandlu wakwaNongoma uthi inkunzi isematholeni, ilubumba luseva, wakhe ikusasa lentsha kusakhanya
INHLANHLA yokuba nomholi owaphekwa yizinhlaka zentsha zenza uMkhandlu uNongoma wehluke. Lokhu kucace bha ngezinhlelo ezahlukene ezenziwa yilo Mkhandlu ekuthuthukiseni intsha yendawo. Ezinyangeni ezimbili athatha izintambo njengeMeya yakwaNongoma, ekhuluma neBayede, uMhlonishwa u-Albert Mncwango oyiMeya yoMkhandlu wakuveza ukuthi isifiso sakhe wukuthu uhlelo loMkhandlu lwentsha lube yilo olungagcini nje ngokwenza imicimbi yosuku olulodwa. NgokukaMncwango intsha kumele ‘ibe yingxenye yokwakhiwa kwemithetho kanye nokuluswa kwayo’.
Ekhuluma neBAYEDE lo mholi wathi: “Ngaba nenhlanhla engandelwe ngubani yokuthi ngiphekwe ezinhlakeni zentsha yeqembu engikulo. Akwagcina lapho kepha ngaba yingxenye yezinhlaka lapho kushaywa futhi kweluswa khona ukusebenza kweminthetho nezinhlelo zikaHulumeni. Lokhu kwenza okokuqala ngingexwayi ukusebenza nentsha ngqo. Okwesibili kwenza ngibe nesithombe sokwazi lokho okuyizidingo zentsha ezikhathini ezehlukene,” kubeka uMpangazitha.
Esikhathini esingangonyaka asho lawa mazwi uMkhandlu usuqalile ukuqhamuka nokuhlela kabusha izinhlelo ezithinta intsha endaweni. Ngaphandle nje kohlelo lokuthuthukiswa kwamakhono entsheni nolwathulwa ngonyaka owedlule, ngenyanga eyedlule uMkhandlu usondeze intsha etafuleni lokwakhiwa nokweluswa kwemithetho.
Emuva kochungechunge olwenzeke emawadini uvuthondaba lube edolobheni kwaNongoma eholo iMulti Purpose Hall. Kulo mcimbi uMkhandlu ubuhlanganise intsha evela kuwo wonke amawadi ngenhloso yokwenza okubili nokuqinisekisa ukuthi lo Mkhandlu ongeminye yaleyo esemakhaya uba neqhingasu elisebenzayo lokuthuthukisa intsha yendawo. Okwesibili wukwethula uMkhandlu wentsha nokuyiwo phakathi kokunye esizoba yinkundla lapho intsha evela emkhakheni eyehlukene ezokwazi ukudingida hayi kuphela izinhlelo zentsha kepha noku lekelela ekutheni uMkhandlu ukwazi ukulumbanisa inqubomgomo ukuze ihambisane nezinhlelo zentsha.
UMkhandlu weNtsha wakhiwe ngamaqembu ehlukene. Oqokwe njengeMeya yoMkhandlu weNtsha kube nguMnu uMphatho Nxumalo kwathi uMnu uMthoko Nxumalo yena waqokwa njengoSomlomo.
“Kufike ukuthokoza kimi uma ngibona intsha yakwaNongoma ikhuluma ngazwi linye ezindabeni ezithinta yona. Kuyisifiso sethu ukuba uMkhandlu wentsha ubuke ngeso elibanzi izinkinga zentsha ngale kwepolitiki. Futhi siyafisa loMkhandlu weNtsha uqonde ukuthi ikhona nenye engaphandle kwezinhlaka zepolitiki,” kubeka iMeya.
Injolozela yoMkhandlu Njengazo zonke izindawo KwaZulu-Natal nakwaNongoma kunesililo sesihlava zokudlwengulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane. Akumangazanga nxa izingxoxo eMkhandlwini weNtsha zigxila kulokhu. Lokhu kukhuluma kuvele nakakhulu enkulumeni yosuku ebiyethulwa yiMantshi uMaKhumalo Nkosi nokhale ngokuthi kwenye inkathi nemiphakathi iyasibhebhethelisa lesi sihlava.
IMatshi ithe phakathi iyathula kanti nabo abesifazane abasuke bengabagilwa bavame ukwenza okufanayo. Wenze isibonelo sokuthi izinkantolo zithola amacala kuthi lapho zithi ziyaqala ukusebenza bese amacala lawo ayesulwa nathe yikho kwenye inkathi okudala inkinga ekufikeni ekugwetshweni kwabenzi bobubi.
Olunye udaba olubukeka luseyiva kwaNongoma yilelo lwezidakamizwa, ukukhulelwa kwentsha nezifo. Iphawula iMeya yoMkhandlu weNtsha uMnu uMpatho Nxumalo ugqugquzele intsha ukuba ibe sekhaleni lempi elwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane kwaNongoma wabuye wakhuthaza intsha ukuthi ingandondi ukuyohlolela izifo ezingamahlala khona okubalwa isifo sfuba, umdlavuza kanye nesifo i-AIDS.
Umhlangano woMkhandlu ubuye wahanjelwa yilowo onguzime noqokelwe kwabahlanu kuMiss South Africa, uNks uNoxolo Ndebele nolinxusa loMkhandlu uNongoma. UNks uNdebele uhambe emagameni kaNxumalo wabe esengeza ngokuthi ukuba ne-Aids akusho ukuthi usuthole isigwebo sentambo. Ugquqguzele ukuthi njengazo zonke i-Aids ayithathwe njengazo zonke izifo kanye nezingqinamba.
“Yize impi yethu ithi asingandisi isibalo saba ne-Aids iqiniso lithi kukhona asebenaso okumele singabalibali. Umyalezo wethu kubo kumele kube yilowo wethemba noveza ukuthi ngale kwegciwane kukhona ukuphila,” kusho le ntokazi.
IMeya uMpangazitha iphethe ngelithi uNongoma usethubeni elihle lokuba ngohamba phambili ngezinhlelo zentsha inqobo nje uma kukhona ukubambisana. “Isipiliyoni sami sokusebenza nabantu abasha singitshela ukuthi simi kahle njengoNongoma. Ngike ngaxhumana neningi labantu abazalelwa kule ndawo yakithi asebewutho kweminye imikhakha asebahlala emadolobheni amakhulu. Bonke bathi kimi ‘bami ngomumo ukulekelela’. Lesi yisiqalo nengifisa sakhele kuso ngoba ikusasa likaNongoma likulaba bantu abasha. Futhi ngiyagcizelele ukuthi asingagcini ngokunaka intsha esemaqenjini ngoba ikhona nasemasontweni, zikhona nezintombi ezihlakeni zoBukhosi, “ kuphetha uMpangazitha nothe kubo intsha ayikho mqoka ngenyaka kaNhlangulana kuphela kepha izinhlelo nokuxhumana kuyinto yansuku zonke.